ग्याङरेप पीडितलाई भेट्न हाथरस जाँदै गर्दा राहुल गान्धी पक्राउ - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
ग्याङरेप पीडितलाई भेट्न हाथरस जाँदै गर्दा राहुल गान्धी पक्राउ
२०७७ आश्विन १५, बिहीबार १७:२०:००
उत्तरप्रदेश हाथरसकी ग्याङरेप पीडितका परिवारलार्इ भेट्न जाँदै गर्दा राहुल गान्धी र प्रियंकालाई ग्रेटर नोएडामा प्रहरीले अवरोध गरेपछि दुवै जना कारबाट ओर्लेर पैदल अगाडि बढे ।
केही समयमै नोएडा एक्सप्रेस-मार्गको इकोटेक-१ थाना इलाकामा प्रहरीले राहुललाई गिरफ्तार गर्‍यो । गिरफ्तार हुनुपूर्व धक्काधक्की हुँदा राहुल जमिनमा पल्टिए । प्रहरीले राहुलको कलर पनि समात्यो । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार राहुलका हातमा चोट लागेको छ ।
राहुलले भने, 'प्रहरीले मलाई धकेल्यो, लाठी चार्ज गर्‍यो, मलाई जमिनमा पछार्‍यो । त्यसैले म सोध्न चाहन्छु- यो देशमा मोदीजी मात्रै हिँड्न पाउँछन् ? के सामान्य मानिस हिँड्नै पाइन्न ?
हाम्रो कारमा रोक लगाइयो, त्यसैले हामी पैदल हिँड्न थाल्यौँ । म ग्याङरेप पीडित परिवारलाई भेट्न चाहन्छु, यिनीहरूले मलाई रोक्न पाउन्नन् ।'
राहुलले प्रहरीलाई सोधे, 'कुन धारामा तपाईले मलाई गिरफ्तार गर्दै हुनुहुन्छ ? जनता र मिडियालाई बताउनुस् ।' प्रहरीले भन्यो, 'सर, कारण सबैलाई बताइन्छ । तपाईले धारा १८८ को उल्लंघन गर्नुभएको छ ।'
सन् २०१६ मा पनि राहुल र प्रियंका ग्याङरेप पीडितका परिवारलाई भेट्न नोएडा पुगेका थिए । तत्कालीन सरकारले उनीहरूलाई रोकेको थियो । त्यसपछि दुवै जना दिल्ली फर्कनुपरेकको थियो ।
प्रियंकाले ट्वीटमा भनेकी छन्, 'ग्याङरेपको सिकार पीडिताका पितालावई जबर्जस्ती लगिएको छ । सिएमले भिसीका नाममा दबाब दिइएको छ । पीडिताका पिता हालसम्म गरिएको परीक्षण र कारबाहीबाट सन्तुष्ट छैनन् । अहिले पुरै परिवारलाई नजरबन्दमा राखिएको छ । उनीहरूलाई कसैसँग बोल्न दिइएको छैन, उनीहरूलाई धम्काएरै चुप लगाउन चाहन्छ सरकार ?'
पीडितका गाउँमा प्रहरीको तैनाथी छ । कुनै बाहिरी व्यक्ति पीडितका घरसम्म पुग्न दिइन्न, यसका लागि गाउँ बाहिर सडकमै अवरोधक लगाइएको छ । मिडियालाई पनि गाउँमा जाने अनुमति छैन । गाउँको प्रवेशद्वारमा एडिएम तहका अधिकारी पनि तैनाथ छन् ।
हाथरसका एसपी विक्रान्त वीरले अलीगढ अस्पतालको मेडिकल रिपोर्टमा पीडितको शरीरमा घाउ भएको उल्लेख छ तर दुष्कर्मको पुष्टि नगरिएको बताए । चिकित्सकले फोरेन्सिक रिपोर्ट आएपछि यसबारे केही भन्न सकिने बताए ।
हाथरस जिल्लाको चन्दपा इलाकाको गाउँमा १४ सेप्टेम्बमा चार जनाले १९ वर्षीया युवतीमाथि ग्याङरेप गरेका थिए । आरोपीहरूले युवतीको गर्नको हड्डी भाँचिदिए र जिभ्रो पनि काटिदिएका थिए । दिल्लीमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो । चारै आरोपी गिरफ्तार गरिएका छन् । (भास्कर)
प्रविधिका क्षेत्रमा अमेरिकालाई टक्कर दिने तयारीमा चीन
फ्रान्सको निस सहरमा चक्कु प्रहार गरी तिन जनाको हत्या
अमेरिकामा एक सातामा पाँच लाख नयाँ संक्रमित : फ्रान्समा एकमहि...
‘४० लाख गरिब बालबालिकालाई निःशुल्क भोजन उपलब्ध गराइयोस्’
कोरोना संक्रमण रोक्न लकडाउन होइन कन्ट्याक ट्रेसिङलाई मजबुत ब...